Consiglio di oggi 16 Settembre 2020 di San Bernardo | Ilblogdellapreghiera
Nzukọ nke taa 16 Septemba 2020 nke San Bernardo
Saint Bernard (1091-1153) Nnukwu
Onye mọnk Cistercian na dibia nke Church
Ezigbo 38 na Abụ Abụ
Amaghị nke ndị na-anaghị atọghata
Pọl onyeozi kwuru, sị: "showfọdụ na-egosi na ha amaghị Chineke" (1 Cor 15,34: XNUMX). Ana m ekwu na ndị niile na-achọghị ịtụgharị na Chineke chọtara onwe ha n’amaghị ama a. Ha, n’ezie, jụrụ ntughari a maka naanị na ha chere na Chineke onye ụtọ na-enweghị njedebe dị egwu ma sie ike; ha na-eche na onye ahụ bụ ebere na-enweghị nsọtụ siri ike na enweghị mmetụta; ha kwenyere na onye ihe ike ma di egwu nke na-acho nani otuto. Ya mere, onye ajọ omume na-agha ụgha nye onwe ya site n'ime onwe ya arụsị, kama ịmara Chineke dị ka ọ dị n'ezie.
Gịnị ka ndị a okwukwe ha na-anaghị atụ ụjọ na-atụ? Chineke enweghi ike igbaghara ha nmehie ha? Ma, o ji aka ya kpọgide ha n’elu obe. Olee ihe ọzọ ha na-atụ egwu ya? Na-adịghị ike ma na-enweghị ike onwe ha? Ma, ọ ma ụrọ nke o ji kpụọ anyị. Ya mere, gịnị ka ha na-atụ egwu? Bemebi iwu ka ị ghara ịtọghe agbụ nke omume? Ma Onye-nwe tọhapụrụ ndị nọ n’agha (Ọma 145,7). Mgbe ahụ, hà na-atụ egwu na Chineke, n'ịbụ onye mmejọ ha bara ụba nke iwe, ga-ala azụ ịgbatị ha maka ọrụ ebere? Ma, ebe nmehie bara ụba, amara na-aba ụba karịa (Rom 5,20: 6,32). Nchegbu a na-enwe maka uwe, nri, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ndụ ọ̀ na-egbochi ha ịhapụ ihe onwunwe ha? Mana Chineke maara na anyị chọrọ ihe ndị a niile (Mt XNUMX: XNUMX). Kedu ihe ọzọ ha chọrọ? Gịnị na-egbochi nzọpụta ha? Eziokwu bụ na ha na-eleghara Chineke anya, na ha anaghị ekwere okwu anyị. Ya mere nwee okwukwe na ahụmahụ nke ndị ọzọ!
← Na post gara aga Gara aga post:Nsọpụrụ Chineke: Olileanya nke eluigwe
Ọzọ Post → Post ozo:Kedu otu anyị ga-esi kwekọọ ọbụbụeze Chineke na nnwere onwe ime nhọrọ?